Izitali zeStrahan #4 Indawo yokuhlala eRough-Luxe
Igumbi elinomnyango ophumela ngaphandle yonke sinombuki zindwendwe onguJeanet And Andrew
Izitali ngamava esitayile esiRough-Luxe esibekwe kude eStrahan kuNxweme oluseNtshona lweTasmania, isango lokuya kwintlango yokugqibela epholileyo eMhlabeni. Umbindi wesikhephe esihamba ngenqanawa kunye netheminali kaloliwe, ikude lee kwindlela ophila ngayo okhawulezayo kwaye inika ithuba lokuzulazula kwindawo enomtsalane entlango.
Phumla kwimigangatho emibini yakho phezulu, phakathi kwepayini kunye nemithi yeentsini, ichibi kunye nerivulet. Yonwabela ulonwabo olulula lwelinen yaseFransi eqaqambileyo, amalaphu asemgangathweni kunye nekofu engapheliyo, iincwadi, umculo kunye neeDVD. Ngokuthe ngqo ngaphaya kolwandle oluncinci olunokutshona kwelanga okuhle kunye neembono zamanzi eLong Bay. Ukuhamba umgama ukuya eHogarth Falls, iivenkile, iindawo zokutyela, oololiwe kunye nezikhululo zokuhamba ngenqanawa. Ngokujolisa ekuzipholeleni endaweni yokungcungcuthekisa, ixesha lakho kwizitali liya kukushiya uhlaziyekile ngokupheleleyo.
4.91 · Izimvo eziyi-511
IStrahan imi kuNxweme oluseNtshona lweTasmania kumda weTasmanian Wilderness UNESCO World Heritage Area kwaye likhaya lezityalo nezilwanyana ezibaluleke kakhulu kwihlabathi kunye nenye yeendawo zokugqibela zamahlathi ashinyeneyo afumaneka emhlabeni.
Umbuki zindwendwe ngu- Jeanet And Andrew
UJeanet And Andrew yi-Superhost
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Strahan